ट्राफिक प्रहरी निरिक्षकले मापसे गरी सवारी चलाउँदा… — Paschimnews.com News From Nepal
ट्राफिक प्रहरी निरिक्षकले मापसे गरी सवारी चलाउँदा…
अरुले मापसे गरे समातेर जरिवानादेखि हिरासतसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने ट्राफिकका हाकिम आफैँले होस् गुम्ने गरी मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउँदा के हुन्छ ? हाकिमको कारले यात्रुवाहक बसलाई ठक्कर दिन्छ ।
तर, यस्तो गम्भीर कसुरमा प्रहरीले नै उहिल्यै प्रवीण गुरुङ हत्याकाण्डमा तत्कालिन शाहज्यादा पारश शाहलाई जोगाउन नक्कली चालक खडा गरेको इतिहास दोहोर्याइन्छ ।
यस्तो घटना कपिलवस्तुमा भएको हो । त्यहाँको राजमार्गमा पर्ने बैरियामा गतसाता जिल्ला ट्राफिक प्रमुख बाबुराजा पन्तले अत्यधिक मदिरा सेवन गरी बा. १६ च ५५७० नम्बरको आफ्नो निजी कार चलाएका थिए । बिरामी ससुरालाई भेट्न जाँदा रक्सी पनि पिएका थिए ।
५० वर्ष उमेर कटेका उनलाई थोरै रक्सीले बढी लागेछ क्यार, बुटवलबाट कृष्णनगरतर्फ जाँदै गरेको लु १ ख ३९६९ नम्बरको यात्रुवाहक बसलाई ठक्कर दिन पुगे ।
कारले ठक्कर दिएपछि बसवालाले पनि किन छाड्थे र, बाटोभरि मान्छे जम्मा पारेर होहल्ला मच्चाउन थालिहाले । त्यसमाथि ट्राफिककै इन्स्पेक्टरले त्यस्तो हर्कत गरेपछि के चाहियो र, वरिपरिका रमितेले गर्दा बैरिया चोक जात्रा लागेजस्तो बन्यो । इप्रका पिपराअन्तर्गत पर्ने घटनास्थलमा सिभिलतिरका इन्स्पेक्टर पुगे । ट्राफिक इन्स्पेक्टर खुट्टा पनि राम्रोसँग टेक्न नसक्ने हालतमा थिए ।
सिभिल इन्स्पेक्टरले जिप्रकाका एसपी अच्युत पुडासैनीलाई फोन गरेर घटनाबारे रिपोर्ट दिए । उनले ‘मिलाइदेऊ यार’ भनेपछि नक्कली सवारी चालक खडा गर्नेतिर प्रहरी सक्रिय भयो । चार नम्बर जितपुरमा कपिलवस्तु अटोल्याण्ड नामक गाडी बनाउने ग्यारेजका झविन्द्र खनाल पनि रमिता हेर्न पुगेका थिए ।
सिभिलका इन्स्पेक्टरले ‘यता आऊ भाइ’ भन्दै तानेर मुख सुँघे । ‘खाएका छैनौ नि ?’ भन्दै ‘यो गाडी मैले नै चलाएको हुँ भन है’ भने । उनलाई भनिएको थियो, ‘ठोक्किने र ठोक्काउने दुबै गाडी तिम्रो ग्यारेजमा मर्मत गरिनेछ । व्यापार पाउने भयौ, पुलिसलाई सहयोग पनि गर्ने भयौ ।’ काम पाइने, कारवाही पनि खासै नहुने भएपछि उनले हुन्छ भने । त्यसपछि ट्राफिक इन्स्पेक्टर बाबुराजा इप्रकामा लुकाइए र भविन्द्र बने दुर्घटना गराउने कारको चालक । उनको स्वास्थ्य परीक्षण भयो ।
एकछिन हिरासतमा राखेजस्तो गरियो । र, भोलिपल्ट छलफलका लागि आउने भनी कागज गरेर आफन्तको जिम्मामा छाडियो । भोलिपल्ट सहमति भयो, आ–आफ्नो गाडी, आ–आफूले नै बनाउने । र, बनाउने ठाउँचाहिँ भविन्द्रको ।
कारले ठक्कर दिनुमा बसको पनि गल्ती भएको बताइन्छ । अगाडि दौडिरहेको बसले एक्कासी ब्रेक लगायो, फलस्वरुप कारले आफ्नो स्पिड कन्ट्रोल गर्न सकेन र ठक्कर दियो । चालक होसमा भएको भए त्यसो हुने थिएन । ती ट्राफिक इन्स्पेक्टरलाई संगठनले डिएसपीमा बढुवा नदिएको असन्तुष्टि थियो । त्यही कारण बढी पिउने आदत लागेको बताइन्छ । -जनआस्था साप्ताहिक